महानगरतालिका - व्यंग्य - प्रकाशितः चैत्र ८, २०७५ - नेपाल
"तपाईंजस्तो सदाचार पक्षधर व्यंग्यकारले बिचौलियालाई काम लगाएर बेथितिलाई बढावा दिनुभएन नि !" भनेर महानगरका एक हाकिमले भनेपछि म पनि गमक्क परेँ । उनकै सल्लाहअनुसार नक्सासहित आवश्यक कागजात १५ दिनमा भेला पारी घरको 'निर्माण सम्पन्न' भन्ने प्रमाणपत्र हात पार्न कस्सिएँ ।
संघीय राजधानीको महानगरपालिकाले पूरै महानगरभरि छरेर १०-१२ ठाउँमा शाखा खोलेको रहेछ । तीमध्ये मलाई सेवा दिन खटिएको रहेछ, बबरमहल कार्यालय । तयारी फाइल लिएर कार्यालय पुगेँ, पहिलो दिनको तालिकाअन्तर्गत । डेढ घन्टाजति लाइन बसेर प्राप्त दस रुपैयाँको भौचरसहित राजस्व शाखा हुँदै कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने कोठामा पुगेर फाइल लाइन लाग्यो ।
दोस्रो दिनको तालिका : कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गराई आदेशानुसार वडा कार्यालय प्रस्थान । वडा कार्यालयमा आइतबारको दिन इन्जिनियर नभेटिने जानकारी प्राप्त ।
तेस्रो दिन : वडाका इन्जिनियरसाब हाजिर गरेर खाना खान जानुभएको जानकारी । फोनमै कुराकानी । तीन दिनपछि घर हेर्न आउने आश्वासन ।
छैटौँ दिन : इन्जिनियरको आगमन । पुरानो फाइल नभएकाले टेकु गएर फाइल ल्याएपछि मात्रै काम हुने जानकारी ।
आठौँ दिन : टेकु महानगरबाट फाइल हातलागी गरी वडामा सम्पर्क ।
एघारौँ दिन : वडा इन्जिनियरबाट घर निरीक्षण कार्य सम्पन्न । चार दिनपछिको तारिख प्राप्त ।
पन्ध्रौँ दिन : वडामा राजस्व रकम निर्धारण ।
सोह्रौँ दिन : बैंकमा रकम जम्मा गरी राजस्व शाखामा सम्पर्क । थप सम्पत्ति कर बुझाएर आउन पुनः वडा कार्यालय फिर्ता । वडामा पुग्दा आर्थिक कारोबार गर्ने समय समाप्त ।
सत्रौँ दिन : वडामा थप सम्पत्ति कर बुझाई बबरमहल हाजिर । राजस्व शाखामा काम सम्पन्न गरी डाटा इन्ट्रीका लागि लाइनमा खडा । आफ्नो हिसाब हेर्ने पालो आइपुग्दा सरलाई पिसाबको आगमन । पिसाब गरिसक्दा एकघन्टे खाजा खाने छुट्टी । सवा एक घन्टा पनि नकट्दै सरको आगमन र फाइल अध्ययन । इन्जिनियरले इन्ट्री गरेको रकम नमिलेको देखिएपछि पुनः वडातिरै फिर्ता ।
अठारौँ दिन : वडा इन्जिनियरबाट त्रुटि मिलान ।
उन्नाइसौँ दिन : सच्चिएको फाइल बबरमहल लगी इन्ट्री गराई अन्तिम हस्ताक्षरका लागि हाकिमसाबकहाँ क्यू ।
बीसौँ दिनः हाकिमसाबद्वारा तीन घन्टापछि भुइँतलामा सम्पर्क गर्न आदेश । आदेशानुसार भुइँतलाको कोठामा सम्पर्क गर्दा फाइल नआइपुगेको जानकारीपछि हाकिमकहाँ जाँदा उहाँ अदालततिर प्रस्थित ।
एक्काइसौँ दिनः फाइल तल्लो नभई पल्लो कोठामा पसेको जानकारी । पल्लो कोठामा कुरा बुझ्दा सनाखतका लागि घरधनीको उपस्थिति अनिवार्य । घरधनी श्रीमतीजीलाई लिएर पुनः हाजिर हुँदा १ बजिसकेकाले खाजा समय सुरु । पर्खिने समय नभएकाले फिर्ता ।
तेइसौँ दिन : सनाखत सम्पन्न । व्यंग्यकारजीलाई विशेष सहुलियतस्वरुप भुइँतलामा भोलि हुने काम आजै सम्पन्न गरी प्रमाणपत्र हस्तान्तरण । तिनै पहिला भेटिएका हाकिमसँग जम्काभेट । उनको प्रश्न, "कस्तो अनुभव रह्यो त सर ?"
मेरो जवाफ : "घर बनाउँदा स्वीकृत नक्साअनुसार बनाएको भए आज यसरी जरिवाना तिर्ने, धाउने र अपहेलित हुँदा पनि चुपचाप सहेर बस्नुपर्ने थिएन भन्ने ज्ञान प्राप्त भयो सर ।"